ဆေးဘက်ဆိုင်ရာက x ray ပုံရိပ်စက်, မိုဘိုင်းဆေးခန်း, X ကို ray စက်တင်ဒါထုတ်ကုန်, မိုဘိုင်းဘတ်စ်ကား / နောက်တွဲယာဉ် / ထရပ်ကားဆေးခန်း-Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ(Tianjin) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MOBILE MEDICAL ဆောင်းပါးတွဲ
ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ image ဆောင်းပါးတွဲ
ကျွန်တော် DREAM အကောငျးဆုံးအရည်အသွေးသူတို့ရဲ့ Persistent လိုက်စား FROM မှစစျမှနျတဲ့လာ ...
Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ (Tianjin) Co. , Ltd မှ.
ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ (Tianjin) Co. ,, Ltd မှတရုတ်အမေရိကန်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး. ဒါဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း R ကိုအထူးပြုဖြစ်ပါသည်.
ORICH အရည်အသွေး system ကိုဆည်းပူးခဲ့ပါသည် QSR820, ISO9001, ISO13485, YY / T0287; RSNA ၏ဂုဏ်အသရေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ဆုချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်; အမျိုးသားနိုင်ငံခြားအကူအညီနှင့်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်မတီကများအတွက်အဓိကပရောဂျက်အရည်အချင်းပြည့်ထောက်ပံ့; WHO က၏အရည်အချင်းပြည့်ထောက်ပံ့; တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ Association ကများနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံချက်လုပ်ငန်း.
ခုနစ်နှစ်, ညီမျှသည် 2,555 ရက်ပေါင်း, 61,320 နာရီ, 3,679,200 မိနစ်များ, နှင့် 220,752,000 စက္ကန့် ...
ခုနစ်နှစ်, ကြီးထွားလာတက်ကိုယ်စားပြု, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ရင့်ကျက်သို့မဟုတ် oldness.
ခုနစ်နှစ်, အသက်အဘို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ. အနည်းငယ် sev ရှိပါတယ် ...
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်, ပို. ပို. မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များမြို့ကြီးများမှ ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကနေပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ, ကျေးရွာပေါင်း, မိုင်း, နှင့်နယ်နိမိတ် ... အဆိုပါဝယ်ယူဖောက်သည်ကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်လာကြပါပြီ, ထိုသို့သောကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစု PLA အဖြစ် ...
ကျနော်တို့ဆေးပညာဆိုင်ရာက x ray စက်ကိရိယာများနှင့်အမျိုးသားနိုင်ငံခြားအကူအညီများ၏စိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းဆေးရုံအရည်အချင်းပြည့်ပေးသွင်းများမှာ, ကြက်ခြေနီအင်တာနေရှင်နယ်ကော်မတီ, WHO ကနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ, စသည်တို့ကို
အဆိုပါ lastest သတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့အီးမေးလ် Subscribe